HURUMENDE yakapinda muchikamu che8th China (Shanghai) International Technology Import uye Export Fair
CORBITION kambani yakapihwa zita remutero unobhadhara kubhadhara muShanghai. Uku ndiko kusimbiswa kweCORBITION tekinoroji, asiwo kudzoka kwevashandi vese veCORBITION kunzanga. Munguva yakapfuura yechisere China (Shanghai) International Technology Import uye Export Fair, zvigadzirwa zvedu zvakazivikanwa nehunhu hwemweya weChinese uye wehunyanzvi weiyo bvunzurudzo nemishumo. Muchiratidziro ichi, CORBITION yakaratidza 36-bit uye 48-bit nucleic acid yakatora, pamwe neakawanda akateedzana ekurapa akadai senucleic acid yekuchenesa ikholamu, yakadzika gomba ndiro, PCR ndiro, magnetic bar sleeve, nezvimwe. kunyanya inosimudzira maviri nucleic acid yekuburitsa zviridzwa, zvine hunhu hwekureruka mashandiro, nyore kutakura, diki nzvimbo yekugara, nezvimwewo, uye zvakare yakaunza akateedzana eanosarudzika matanho. Kuburikidza neichi chiratidziro, kwete chete kuratidza edu epamusoro zvigadzirwa, asi zvakare kusimudzira yedu kambani mufananidzo, tibatsire isu KONZANI kambani yakareba-kwenguva refu kusimudzira. Iyi kambani yekuratidzira kuwedzera chiono, kufunga kwakashama, kudzidza zvemberi, kuchinjana uye kushandira pamwe, shandisa zvizere chiratidziro ichi, nekutora chikamu kwevatengi nevatengesi kutaurirana, kutaurirana, kutaurirana, kuwedzera kuwedzera kuonekwa kwekambani uye simba, asiwo kuwedzera nzwisisa hunhu hwevamwe vezera zvigadzirwa zvebhizimusi, kuitira kuti uvandudze chimiro chezvigadzirwa zvavo, tamba zvavo zvakanakira ivo. Kubudikidza nechiratidziro ichi takawana zvakawanda, ticharamba tichishanda nesimba, rega vanhu vazhinji vazive nezvechiratidzo chedu.
Kurwisa denda iri ibasa remunhu wese
director weLabhoritari Dhipatimendi rePeking Union Medical College Hospital, akadaro mukubvunzurudzwa pakupera kwa2020: "Mune mamwe matunhu, macomputer ePCR uye nucleic acid extractors aripo, uye nyangwe maRabhoritari ePCR akagadzwa. Zvisinei, chinhu chakakosha kudzidzisa vanhu vane ruzivo nezvema molecular biology vanogona kukunda nedenda iri. ” Izvo zvakakosha.